တရုတ်ရေခဲအုတ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Huizhou
Huizhou ရေခဲပြင်အုတ်များသည်လတ်ဆတ်သောအစားအစာနှင့်ဇီဝဆေးဝါးများအပြင်အအေးမိသယ်ဆောင်စဉ်အပူချိန်အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အပူချိန်ကိုအေးမြသောအပူလေကြောင်းလိုင်းများမှ ဖြတ်၍ သယ်ဆောင်စဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်ကိုအထုပ်တစ်ထုပ်တွင်အမြဲတမ်းအအေးခံရန်အသုံးပြုသည်။
1.Huizhou ရေခဲပြင်အုတ်များသည်လတ်ဆတ်သောအစားအစာနှင့်ဇီ ၀ ဆေးဆိုင်များနှင့်အအေးကွင်းအတွင်းသယ်ဆောင်စဉ်အပူချိန်အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အပူချိန်ကိုအေးမြသောအပူလေကြောင်းလိုင်းများမှ ဖြတ်၍ သယ်ဆောင်စဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်ကိုအထုပ်တစ်ထုပ်တွင်အမြဲတမ်းအအေးခံရန်အသုံးပြုသည်။
ရေခဲတုံး၊ ရေခဲတုံး (သို့) PCM ရေခဲပြင်ထုပ်များကိုလည်းနိုင်ငံအသီးသီးမှရေခဲသေတ္တာဟုခေါ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ရေခဲသေတ္တာအတွက်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အတူတူပင်။ ၎င်းတို့အကြားအဓိကခြားနားချက်မှာအပြင်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုမှာပိုမိုပါးလွှာသောအိတ်တစ်ခုနှင့်နောက်တစ်ခုမှာကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်တာရှည်ခံအထူဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ရေခဲအုတ်သည်အတွင်းပိုင်းတွင်အအေးဓာတ်ပိုမိုများပြားစေသောကြောင့်အအေးလွန်ကဲစေသည်။
3. ရေခဲပြင်အုတ်များသည်အတွင်းပိုင်းရေခဲသေတ္တာနှင့်အပြင်ဘက် HDPE သေတ္တာအဖြစ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်း (PCM) မှပြုလုပ်သည်။ အအေးကွင်းဆက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးထုပ်ပိုးမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲပြင်အုတ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကောင်းမွန်စွာတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်ရဲ့ site ကိုအသုံးပြုသည်။
4.They ပစ္စည်းများအားအများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည် တင်ပို့ရောင်းချမှုနှင့်ဖြန့်ဝေ အတူတူတစ်အအေးအိတ်သို့မဟုတ်အေးသေတ္တာနှင့်အတူ။
5. အုတ်အရွယ်အစားနှင့်အထူနှင့်အတွင်းပိုင်း PCM အပူချိန်ကိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
1.Huizhou Ice Brick သည်အေးခဲသောလေပူဖလှယ်ခြင်း (သို့) လျှပ်ကူးခြင်းမှတစ်ဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအေးစေခြင်းငှါဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၂။ လတ်ဆတ်သောအစားအစာလယ်ကွင်းများတွင်၎င်းတို့သည်အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများ၊ အေးခဲသောအစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံးများကဲ့သို့သောလတ်ဆတ်သော၊ ဒိန်ခဲ၊ ပန်း၊ နို့စသည်တို့
နေ့လည်စာအိတ်ထဲတွင်ရေခဲအုတ်၊ အအေး၊ အအေးများ၊ အအေးများနှင့်တောင်တက်သည့်အခါအအေးခံရန်၊ စခန်းချခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း၊
အကယ်၍ အေးခဲနေသောရေခဲအုတ်ကိုသင်၏ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ထည့်ပါက၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာခြင်း (သို့) အအေးလွန်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအအေးခံသည့်အခါရေခဲသေတ္တာအပူချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
အလေးချိန်（g） အရွယ်အစား(စင်တီမီတာ) အုတ်ပစ္စည်းများ အဆင့် - ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်
-10 ℃， -15 ℃， -18 ℃， -25 ℃，
5 ℃， 18 ℃， 22 ℃
မှတ်စု: အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်အထူကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
1. အဆိပ်မရှိသော (အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ရေ၊ မြင့်မားသောပေါ်လီမာစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ) ၎င်းတို့အားတရားဝင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် ခံတွင်းခံတွင်းအဆိပ်သင့်မှုအစီရင်ခံစာ။ ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ချစွာအသုံးပြုပါ
2. စားနပ်ရိက္ခာတန်း၊ တာရှည်ခံ၊ ထိုးဖေါက်နိုင်စွမ်းရှိသော HDPE ပြင်ပပစ္စည်းနှင့် Eco friendly အအေးဂျယ်လ်တို့မှပြုလုပ်ထားပြီး Huizhou Ice Brick သည်ကုန်ဆုံးချိန်မတိုင်မီပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
gel gel နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အုတ်ခဲသည်အရွယ်အစားပိုမိုကြီးမားပြီးပိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်အတွက်ပိုမိုအေးသောစွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်နိုင်ပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာသန့်ရှင်းသပ်ရပ်ကာအရည်အသွေးမြင့်မားသောဖိအားပေးသောပုံဖော်ထားသည့်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲပြင်အုတ်သည်ယိုစိမ့်မှုကင်းသည်။ ခဲယဉ်းပြီးနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေစေရန်။
1. အအေးမိခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုခြင်းမပြုမီရေခဲသေတ္တာ၊ ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်အအေးခန်းထဲတွင်လုံးဝအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။
၂။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာအိမ်တွင်ရေခဲအအေးခဲခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်သည်အတွင်းရှိ PCM ထက် ၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ပို၍ နိမ့်သည်။
Ice Brick သည်သက်တမ်းမကုန်မီထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ လက်ငင်း Cold Pack
နောက်တစ်ခု: Hydrate Dry Ice Pack